महिलाका स्तन किन बराबरका हुँदैनन् ? यी हुन् कारण — HamroBirgunj Dot Com
Home-Love & Sex-महिलाका स्तन किन बराबरका हुँदैनन् ? यी हुन् कारण
author5February 2016
एजेन्सी । स्त्रीको सबैभन्दा आर्कषक अंग हो स्तन । चाहे त्यो महिलाका लागी होस् वा पुरुषका लागी नै किन नहोस् । चाहे त्यो कुनै सौन्दर्य प्रतियोगीतामा होस् वा पौडी पोखरीमा वा अन्य समयमा युवतीको स्तन पहिलो हेराई नै रोजाई हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तर पनि हत्तपत्त यिनको आकार सुन्दरतामा मानिस हराउने हुनाले यसको साइज समान हुँदैन भन्ने धेरैलाई पत्तै हुँदैन । चिकित्सकका अनुसार पुरुष महिलाको बक्षस्थलप्रति सँधै चनाखो हुन्छन् । पुरुष मात्र होइन महिलालाई पनि आफ्नो बक्षस्थलबारे सँधै चिन्ता र चासो हुन्छ । महिलाका दुइ स्तन मध्ये दुवै बराबर कसैको पनि हुँदैन । दुई स्तन मध्ये एउटा ठूलो र एउटा सानो हुन्छ । जुन आकार आकार प्राकृतिकरुपमा नै बढाउन सकिन्छ । यसका लागि कुनै कस्मेटिक सर्जरी गर्नु पर्ने वा अन्य मद्दत लिन जरुरी छैन । गर्भवती भएपछि स्तनको आकार आफै बढ्छ र केही खुल्ला पनि हुन्छन् ।
तर युवती अवस्थामा देखिने भिन्नता धेरैलाई पत्तै हुँदैन । महिलाका स्तनबारे रोचक कुरा यस्ता छन्:
८ . कतिपय महिलालाई स्तनको टुप्पो अर्थात निप्पल चलाएकै भरमा यौनिक चरमोत्कर्षको अनुभव समेत हुन्छ । ९ . बेलायतको लण्डनमा ३४ यस्ता रेष्टुरेन्ट छन् । जहाँ श्याम्पेनका गिला बक्षस्थलको आकारका छन । अझ अनौठो कुरा त यी गिलाशको आकार अभिनेत्री केट मसको स्तन जस्तो बनाइएको छ । यसमा केटको सिग्नेचर समेत छ ।